गान्धीको नाममा हलाल मासु र दुर्गामाताको मूर्तिमुनि वेश्यावृत्ति
लक्ष्मण देवकोटा जेनेभा, असार २८
जीवनभर अहिंसाको पक्षमा लडेका महात्मा गान्धीको नाममा रेष्टुरेन्ट खोलेर हलाल मासुको बिक्री भएको देख्दा गान्धीको बारेमा जान्ने बुझ्नेलाई कस्तो लाग्ला ? त्यतिले मात्र नभएर हिन्दूहरुकी पवित्र देवी दुर्गामाताको मूर्ति राखिएको रेष्टुरेन्ट खोलेर छेउछाउमा वेश्यावृत्ति र भित्र हलाल मासु बिक्री भएको देख्दा हिन्दूहरुलाई कस्तो अनुभव होला ? स्वीजरल्याण्डको कुटनैतिक शहर जेनेभामा वर्षौदेखि यो धन्दा चलिरहेको छ।
बिहान ५ बजेसम्म रक्सी, वेश्या र जुवाको व्यस्त जेनेभाको पाकिज क्षेत्रमा गान्धीको नाममा पँजाबी साहूले गान्धी प्यालेस र सजनाको नाममा बँगालीले हिन्दू देवीदेवताको काष्ठकलाको मूर्ति कुँदेको रेष्टुरेन्टमा यसरी व्यवसाय चलाइएको छ। नेपालीहरुले समेत काम गर्ने बँगालीले चलाएको इन्डियन प्लाजाका साहूजीले पनि इस्लामहरुले समेत खानेगरी यहाँ हलाल मासु पाइन्छ लेखेर छापेको रेष्टुरेन्टको कार्डमा कालीमाताका टाउकै टाउकाको तस्वीर राखेका छन्।
हुनत मसाज केन्द्र, ब्यूटी पार्लरहरुमा साजसज्जाको लागि बुद्धको मूर्ति राख्ने चलन सँसारभरीको छ। विशेषगरी थाइ र भियतनामीहरुले त ढोकामै बडेमानका बुद्धका मूर्ति राखेका भेटिन्छन्। ढोकैमा नराख्नेले भित्रपट्टि सजाएर राखेका छन्। पाकिजको थाइ मसाज केन्द्रकी भियतनामी साहूनीलाई बुद्धको मूर्ति किन राख्नुभएको भनी सोध्दा, म बौद्धमार्गी हुँ। म हरेक बिहान बुद्ध भगवानको पूजा गर्छु। विशेष गरी मानसिक शान्ति, आराम र दिमागलाई स्वच्छन्द बनाएर आनन्द प्राप्तिको महसुस गराउन यो मूर्तिले धेरै सहयोग पुगेको छ। मनोवैज्ञानिक रुपमै पुष्टि भएको कुरा हो।
जेनेभाका थाइ रेष्टुरेन्टहरुमा बुद्धको मूर्ति राखिनु त सामान्य नै हो। हुँदाहुँदा श्रीलँकन तामिलहरुले रेष्टुरेन्टको नाम नै शिवम्, गणेशन् राखेर शिव र गणेशका मूर्तिहरु सजाएर ब्यापार गरेको भेटियो। रेष्टुरेन्टका साहूहरु आफ्नो क्षेत्रको परिचय दिने यिनै शिव, गणेश, गान्धी, दुर्गा भएकोले व्यापार गर्न सजिलो भएको बताउँछन्। अहिलेसम्म कसैले गुनासो पनि नगरेको र जेनेभा नगर कार्यालयबाट स्वीकृत लिएरै चलाएको उनीहरुको दाबी छ।
जेनेभामा नेपालीहरुको राम्रै बसोबास रहे पनि यौटा पनि हिन्दू या बौद्ध मन्दिर छैन। कसैले बनाउन पहल गरेको पनि छैन। बरु श्रीलँकन तामिलहरुले भर्सोवामा गणेश मन्दिर खोलेका छन्। हप्तामा दुई दिन पूजाआराधना हुन्छ। मन्दिरका सहायक पुजारी तथा आइटी इन्जिनियर कृष्णनाथन्लाई यसरी हिन्दू भगवानको नाममा ब्यापार हुँदा मन दुख्दैन भनी सोध्दा उनले भने, नगर कार्यालयबाटै अनुमति लिएको हुनाले हामीले व्यक्तिगत रुपमा केही भन्न मिलेन। स्थानीय जेनेभा कान्तोनमा गुनासो गर्न गएका छैनौँ। तर, यसरी भगवानको नाममा गाई, बाख्रा, कुखुरा जस्ता पशुपँक्षीहरुको मासुको ब्यापार हुनु राम्रो होइन।
हुनत गान्धीको नाममा हलाल मासुका ब्रियानी, करी र तन्दुरी बिक्री भए पनि साहूहरुलाई कसैले किन गान्धीको नाम राखिस् भन्न आएको छैन। उल्टो भारतीय दूतावासका कर्मचारीहरु मजाले मासु भात खाएर र रक्सी तन्काएर जाने गरेको रेष्टुरेन्टका कर्मचारीहरु भन्छन्। गान्धीको नाम देख्ने बित्तिकै भारतीय करी सम्झेर अरबी, गोरा, चिनियाँ सबै खाना खान आउने हुनाले नाममा कुनै अनर्थ नभएको उनीहरुको दाबी छ।
बर्नको विश्वविद्यालयमा धर्मशास्त्र विषयका प्राध्यापक जे. भल्ली भने यसरी अहिँसक महात्माको नाममा मासु र रक्सीको ब्यापार हुनु गलत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, इस्लाम प्रोफेट मोहम्मदको कार्टुन बनाउँदा त्यत्रो महाभारत हुन्छ, तिनै मुस्लिमहरुले हाम्रा देवीदेवता र अहिँसक गान्धीको नाम बेचेर ब्यापार चलाइरहेका छन। यो गलत हो। जेनेभा नगर कार्यालयसँग समन्वय गरेर अनुमति पत्र नदिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। हामीले मोहम्मदको नाममा ब्यापार गरौँ त, बन्चरो बोकेर हाम्रै ढोकामा आइपुग्छन् उनीहरु।
अनौठो त के छ भने मदिरा प्रतिबन्धित अरब देशका धनी साहू महाजन, तिनका सन्तान र धनी नागरिकहरु गाँजा, रक्सीमा धूत भएर वेश्यालयका ढोकामा हल्लिरहेका भेटिन्छन्। नियालेर हेर्दा कतिपय वेश्यालयका छेउछाउमा हिन्दू देवीदेवताका मूर्ति राखिएका भेटिन्छन्। गतवर्ष गोली हानेर मृत्युदण्ड सुनाइएका साउदी राजपरिवारका सदस्यको पनि बास सोही क्षेत्रमा हुन्थ्यो भनी उनीसँग खिचाएका तस्वीर देखाउँछन् पाकिस्तान पेशावरका अरवाज खान।
गच्छे अनुसार कालो बुर्का लगाएका ४।५ वटा श्रीमती र सन्तानको ताँती लगाएर स्वीजरल्याण्ड घुम्न आउँछन् अरबी धनाढ्यहरु। स्वास्नी केटाकेटीलाई होटलमा छोडेर नशा गर्न र वेश्यावृत्तिको निम्ति पाकिज क्षेत्र धाउँछन् लोग्नेहरु। लिवियामा मारिएका कर्नेल मोहम्मद गद्दाफीका मारिएका छोराले नशाको सुरमा धूत भएर काम गर्न लिबियाबाटै ल्याएकी घरेलु कामदारलाई कुटेर हल्लाखोर भएपछि जेनेभा पुलिसले उनलाई होटलबाटै हत्कडी लगाएर खोरमा हालेको थियो। स्वीस कानून अनुसार सजाय भोगिसकेपछि उनलाई निकालिएको थियो भनी त्यतिबेलाका अखबारहरुले लेखेका थिए।
कर्नेल गद्दाफीको फोन सरकारलाई आएपनि आफ्नो देशको कानून अनुसार उनका छोरालाई ब्यवहार हुने भनेर गद्दाफीका छोरालाई सजाय दिएको थियो जेनेभा पुलिसले। अल्पसँख्यक रुपमा रहेका हिन्दूहरुका आराध्यदेवको नाममा यसरी ब्यापार गरिनु नराम्रो भएपनि सँगठित नभएको हुनाले जसो गरे पनि हुने स्थिति रहेको स्वीकार्छन् जेनेभाका नेपालीहरु।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २८, २०७४, ०१:०७:१६